Barnaamijyada - Qalabka Qalabka | Wararka Gadget (Bogga 2)
Websaydhkee ayaa leh kuwa ugu badan ee saddexaad
Trackers-yada laga heli karo ku dhowaad dhammaan bogagga shabakadda ayaa mas'uul ka ah ogaanshaha dhadhankeenna iyo doorbidyadeena. Adeegsiga VPN waa xalka kaliya ee looga hortagi karo.
Sida loo soo cesho faylka erayga la tirtiray
Ka helitaanka faylka kumbuyuutarkeena wuxuu noqon karaa riwaayad marka hore hadii aynaan raacin talaabooyinka ku cad qodobkaan si aan dhaqso ugu soo ceshano.
Sidee loo soo ceshaa faylka la tirtiray ee Excel
Haddii aan nasiibdarro la kulannay luminta feylka 'Excel', maqaalkan waxaan ku tusaynaa dhammaan xulashooyinka la heli karo si aad ugu guuleysato si guul leh
Sidee looga saaraa adware
Soo ogow waxa ay tahay xayeysiiska iyo sida aan uga tirtiri karno kumbuyuutarkeena ama taleefanka gacanta marwalba si looga fogaado dhibaatooyinka.
MacOS Catalina hadda waa la heli karaa: maxaa cusub iyo sida loo rakibo
Haddii aad rabto inaad cusboonaysiiso macOS Catalina sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, waa inaad maskaxda ku haysaa inay jiraan laba hab oo sidaas lagu sameeyo: mid soon iyo mid gaabis ah
Yuka, waa barnaamijka mobilada noo saamaxaya inaan falanqeyno cuntada iyo waxyaabaha la isku qurxiyo
Thanks to codsiga Yuka, waxaan si dhakhso leh u falanqeyn karnaa tayada alaabooyinka aan ku haysanno guriga ama aan dooneyno inaan soo iibsanno
Mailrelay: Qalabka lagu abuurayo ololeyaasha suuqgeynta iimaylkaaga
Ka ogow wax badan oo ku saabsan Mailrelay, aaladda aad ku abuuri karto kuna maamuli karto suuqgeynta iimaylka iyo ololeyaasha warside ee shirkaddaada.
EaseUS Data Recovery Wizard Pro: Barnaamijka ugu fiican ee lagu soo ceshan karo xogta lumay
Ka ogow wax badan oo ku saabsan EaseUS Data Recovery Wizard Pro, barnaamijka ugu fiican ee ka soo kabashada xogta kombiyuutarkaaga. Sideed ku heli kartaa
Sida loo soo celiyo furaha Hotmail ee la jabsaday
Microsoft waxay bixisaa dariiq toos ah oo ay ku soo ceshan karto furaha Hotmail hadii la jabsaday oo uusan isticmaalehu gali karin si uu wax uga beddelo.
Soo dejiso barnaamijka si aad u qaabeyso funaanado
Haddii aad jeceshahay inaad dharkaaga sameysato ama aad rabto inaad yeelato dhar kuu gaar ah, waxaa jira barnaamij u adeegaya ...
Idphoto4you wuxuu yareeyaa cabirka sawirada Passport-ka khadka tooska ah
Adiga oo aan lacag qarash gareeyn, waxaad si sahal ah u abuuri kartaa sawirro cabbir ahaan baasaaboor ku saleysan waddanka iyo liisaska ...
Khiyaamo si aad uga faa iideysato Spotify taleefankaaga casriga ah
Soo ogow taxanahan tabaha ah ee aad sida ugu badan uga faa'iideysan karto barnaamijka 'Spotify' ee taleefankaaga casriga ah. Xeeladaha Spotify ee Android.
Sida wax loogu qoro PDF
Ku qorida PDF waa geedi socod aad u fudud. Soo ogow barnaamijyada ugu wanaagsan ee mobilada iyo kombiyuutarka si aad u saxdo dukumiintiyada PDF oo aad wax ugu qorto.
Soo Celinta Bilaashka ah: Barnaamijka ugufiican ee lagu soo ceshan karo xogta la tirtiray
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan Recoverit, barnaamijka ugu wanaagsan ee suuqa si aad uga soo kabato xogta la tirtiray kombiyuutarkaaga si fudud oo bilaash ah.
dr.fone: Qalabka lagu wareejiyo laguna soo celiyo WhatsApp-ka iOS iyo Android
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan dr.fone, aaladda kuu oggolaanaysa inaad wareejiso, dib u soo celiso ama aad nuqul ka sameyso sheekooyinka WhatsApp ee u dhexeeya taleefanka Android iyo iOS.
Sida loo sameeyo dokumenti PDF ah
Haddii aad rabto inaad sameysato dukumiinti PDF ah, waa inaad raacdaa dhammaan tillaabooyinka aan kugu tusnay casharkaan.
Sida loo cadaadiyo PDF
Soo ogow dhammaan dariiqooyinka jira si aad ugu cadaadiso PDF kombiyuutarkaaga, laga bilaabo bogagga shabakadda illaa Adobe Acrobat Pro si aad ugu eegto Mac.
Liiska adeegga Emule 2021 waxaa lagu cusbooneysiiyay adeegeyaal si buuxda loo dammaanad qaaday. Soo ogow sida loo cusbooneysiiyo emaylkaaga si otomaatig ah ama gacanta ah.
Sida loo xoreeyo booska iCloud
Haddii aad rabto inaad ka hesho boos bilaash ah koontadaada iCloud adigoon lagu qasbin inaad kireysato meel badan, halkan waxaa ku yaal tilmaamo si aad u gaarto.
Sida loo kala fur furo faylasha
Haddii aad raadineyso codsi aad ku furto feylashaada oo ah qaabka RAR PC-gaaga, Mac, iPhone ama Android, markaa waxaan ku tusi doonaa kuwa ugu fiican.
Sida loo rogo fiidiyow leh VLC
VLC waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee aan maanta gacanta ku hayno oo loogu talagalay madal kasta, tan iyo ...
Sida loo sameeyo nuqullo keyd ah
Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo sameeyo nuqullo nuqul ah casrigaaga, kombiyuutarkaaga ama kiniinigaaga, qodobkaan waxaan kuugu soo bandhigeynaa dhammaan hababka la heli karo.
Sida looga gudbo PDF-ka iyo JPG
Ka gudubka PDF ilaa JPG waa geedi socod aad ufudud oo aad ugu baahan aqoon ballaaran oo maadada ah. Qodobkaan waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo.
Sida loo soo degsado fiidiyowyada YouTube barnaamijyo la'aan
Si aad uga soo degsato fiidiyow kasta YouTube-ka muhiim ma aha in la isticmaalo wax-codsi dhinac saddexaad ah, maaddaama aan ka sameyn karno biraawsarkayaga
Waa maxay Google Drive
Haddii aadan wali aqoon waxa Google Drive yahay, qodobkaan waxaan ku tusi doonaa wuxuu yahay, waxa loogu tala galay iyo waxkasta oo aad ku qaban karto.
Huawei wuxuu ku dhawaaqay EMUI 9.0, oo ah casriyeyntii ugu weyneyd ee nidaamkeeda ku saleysan Android
Shirkadda Shiinaha ayaa sii wadaysa inay ka mid noqoto magacyada adduunka ugu horreeya maalmo ka horna waxay ka saartay Apple kii labaad ...
Sida loo dayactiro galka faylka 'Outlook Inbox'
Soo ogow sida loo dayactiro Sanduuqaaga Muuqaalka haddii aad ku furto qalad la xiriira faylasha PST ee keydinta xogta.
Kordhinta hore ee Firefox waxay horey u lahaayeen taariikh ay dhacayaan
Daahfurka Firefox Quantum, oo ah dib u habayntii ugu dambaysay ee muraayadaha Mozilla Foundation, ayaa suuqa soo gashay sanadkii hore, iyada oo The Mozilla Foundation, oo iska leh aaladda Firefox, ay hadda soo saartay bayaan ay ku sheegayso taariikhda uu dhacayo ee kordhintii hore.
Sida loo rakibo loona maareeyo mowduucyada Google Chrome
Markay tahay u-habeynta daalacashadayada, Google Chrome ayaa ficil ahaan ah biraawsarka kaliya ee noo oggolaanaya inaan sidaa yeelno, ugu yaraanna leh midabbo kale oo aan ahayn Rakibidda iyo maaraynta mawduucyada Google Chrome si loo habeeyo biraawsarkayagu waa geeddi-socod aad u fudud oo aannu hoos ku faahfaahinnay.
Bose QC35II horeba waxay u haysay taageerada Alexa
Bose QC35II horeba waxay u haysay taageerada Alexa. Raadi wax badan oo ku saabsan sameecadaha dhagaha ee hadda isticmaali kara kaaliyaha Amazon
Telefoonkaaga, arjiga lagu galayo bartayada 'Microsoft iOS or Android terminal' ee ku saabsan suuqa
Shirkii ugu dambeeyay ee loogu talagalay horumarinta Microsoft, shirkaddu waxay ku dhawaaqday, marka lagu daro warar kala duwan oo loogu talagalay kooxdan, ...
Waxay soo saaraan barnaamij awood u leh inay ogaadaan waxaad ka fikireyso
Koox cilmi baarayaal ah oo ka socda Kamitani Shaybaarka Jaamacadda Kyoto ayaa ku guulaystay inay soo saaraan barnaamij awood u leh inay ogaadaan waxaad ka fikirayso.
Cloud Music Player: Muusig bilaash ah ka samee iPhone-kaaga daruurta
Cloud Music Player: Dhageyso muusikada bilaashka ah ee daruurta kujira iPhone. Raadi wax badan oo ku saabsan muusiggan muusikada ee loogu talagalay iPhone ama iPad.
Habka mugdiga ah ayaa hadda laga heli karaa Muuqaalka. Waxaan ku tusaynaa sida loo kiciyo
Waxay kuxirantahay isticmaalka kumbuyuutarkaaga, maalinti ama habeenkii, oo ay weheliso xaaladaha nalalka ee deegaanka, waxay u egtahay in adeegga boostada ee Microsoft, Outlook, uu hada helay howl cusub oo dad badan oo isticmaala ay ku qanacsan yihiin: mugdi hab. Waxaan ku tusaynaa sida loo kiciyo.
AI-da cusub ee Google ayaa kaa caawin doonta sixitaanka khaladaadka naxwaha
Noocaan cusub ee Google AI ee loo sii deyn doono Google Docs, wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay saxaan ...
Firefox way aamusin doontaa codka si toos ah fiidiyowyo u ciyaaraya
Xaqiiqdii in kabadan hal munaasabad, waxaad kujirtay cabsi fiican markaad aragto sida dhawaq qarsoodi ah uu bilaabay inuu kasoo baxo dadka kuhadlaya, la'aantiis Cusbooneysiinta xigta ee biraawsarka Mozilla Foundation Firefox si otomaatig ah uma ciyaari doono fiidiyowyada websaydhada aan booqano leh dhawaqa firfircoon.
Sida loo beddelo safafka tiirarka Microsoft Excel
Markaad samaynaysid nooc garaaf ah (oo ku saleysan xogta isbeddelka ah), tirakoobka itimaalka, xisaabaadka, raadinta inta udhaxeysa go'yaal kala duwan, raadi Haddii aad had iyo jeer isweydiiso haddii aad beddeli karto safafka tiirarka warqad-xisaabeed, jawaabta waa haa oo waxaan ku tuseynaa sida loo samee.
Sida loo beddelo meesha galka soo degsashada ee Google Chrome
Google Chrome wuxuu noqday sanadihii ugu dambeeyay biraawsarka ugu isticmaalka badan aduunka, madal Android ah (waxaa loo rakibay qaab) Badalida meesha galka soo degsashada nuqulkeena Google Chrome waa geedi socod aad u fudud oo aan ku faah faahinayno tan. maqaalka.
Sirdoonka macmalka ah wuxuu u yimaadaa qaabeynta daawooyinka cusub
Koox khubaro ah oo ka socda MIT ayaa ku guuleystey inay horumariyaan madal sirdoon macmal ah oo awood u leh inay soo saaraan daawooyin cusub.
RAMpage, cayayaanka halista ah ee saameeya dhammaan Android-ka la soo saaray wixii ka dambeeyay 2012
Koox cilmi baarayaal ah ayaa soo bandhigay waxa loo yaqaan 'RAMpage', oo ah ka faa'iideysi awood u leh adeegsiga nuglaanta saameysa aaladaha Andorid.
Instagram Lite ayaa laga bilaabay dalal dhowr ah si rasmi ah
Waxaan ku jirnaa bartamaha xagaaga oo isticmaalka xogta aaladahayagu wuu kordhayaa ama xitaa wuu adkaanayaa iyadoo kuxiran ...
Nvidia hadda waxay awood u leedahay inay ku ciyaarto fiidiyow kasta 'Slow Motion'
Nvidia waxay si rasmi ah shacabka u tusaysaa sirdoonkeeda cusub ee macmalka ah ee awood u leh inuu ku ciyaaro nooc kasta oo fiidiyoow ah oo Slow Motion ah.
Emulator-ka Android Andy wuxuu ku rakibayaa barnaamijka macdanta 'cryptocurrency'
Emulator-ka Android Andy wuxuu ku rakibayaa barnaamijka loo yaqaan 'cryptocurrency software' kumbuyuutarrada oo dhan halka lagu rakibay, in kasta oo horumariyaha uu beeninayo
Beddelka Nintendo wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku raaxeysato Netflix iyo YouTube dhowaan
Sida laga soo xigtay daadadkii ugu dambeeyay, labada Netflix iyo YouTube labadaba way ku imaan karaan Nintendo Switch wax yar.
Chrome ma oggolaan doono in lagu kordhiyo meelo ka baxsan Kaydka Webka Chrome
Kordhintu waa mid ka mid ah ikhtiraacyada ugu wanaagsan ee bog furayaasha ay heleen sannadihii la soo dhaafay, in kasta oo ragga ...
Apple wuxuu hagaajiyaa cilladda amniga macOS ee 11-sano
Apple waxay hada shaacisay inay ugu dambayntii xaliyeen mushkilad amni oo aad uxun oo kujirtay macOS mudo kabadan 11 sano.
Kuwani waa mabaadi'da anshaxa ee Google u adeegsan doono horumarinta nidaamyadeeda sirdoonka farsamada
Google ayaa hadda ku dhawaaqday hirgelinta heerar cusub oo anshaxeed ay raaci doonaan marka ay soo saaraan caqliga macmalka ah.
Dhamaan wararka ku jira macOS Mojave
Halkan waxaan ku tusinaynaa dhammaan wararka ka imanaya gacanta nooca soo socda ee macOS, oo loo baabtiisay sida Mojave.
Faa'iido ayaa lagu ogaadey arjiga kombuyuutarka ee Steam kaas oo jirey 10kii sano ee la soo dhaafey
Thanks to caawinta khabiirka amniga kombiyuutarka Tom Court, nuglaanta halista ah ee ku jirta macaamiisha kombiyuutarka Steam ayaa la xaliyay, taas oo ugu dambeyntii lagu xaliyay dhowr bilood ka hor Valve.
Microsoft waxay ku andacooneysaa in Windows 10 uusan u baahneyn wax antivirus ah
Ka dib markaan arkay sida tijaabooyinka AVTEST ay u xaqiijinayaan in Windows Defender uu yahay xalka ugu fiican ee antivirus ee suuqa, shirkadu waxay ku muujineysaa boggeeda.
Shaqo ma raadineysaa? Google wuxuu ka bilaabay Spain mashiinkeeda shaqo raadinta
Waa run in maalmahan ay fududahay in shaqo la helo sababo la xiriira dib u soo kabashada dhaqaalaha dalka, laakiin ...
Beddelka ugu fiican ee Instapaper, hadda markay joojisay ka shaqaynta Yurub
Markaad xirto adeegga si aad u keydiso boggaga internetka si aad u aqriso kadib Instapaper, qodobkaan waxaan ku tusi doonaa taxane ka badan wax ka bedel sax ah.
Starbucks wuxuu ka tayo roon yahay Apple Pay, Google Pay iyo Samsung Pay lacagaha moobilka
Starbucks barnaamijka lacag bixinta moobilka waa wax kucusub America. Raadi wax badan oo ku saabsan guusha barnaamijka silsiladda kafeega ee Ameerika.
Google Duo wuxuu u keenayaa wadaagista shaashadda Android
Google Duo wuxuu u isticmaali doonaa wadaagida shaashadda Android. Raadi wax badan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee imanaya qalabka Android ee barnaamijka wicitaanka fiidiyaha.
Sida loo dhejiyo kordhinta Google Chrome
Kordhinta oo leh dhammaystir buuxa ee biraawsar kasta. Haddii aadan weli go'aansan inaad isku daydo kordhinta biraawsarka ugu caansan suuqa, hoosta waxaan ku tusi doonaa sida loogu rakibo barnaamijyada Google Chrome.
Sirta PGP waxay leedahay nuglaansho, emaylku hadda uma ahan hab isgaarsiin aamin ah
Koox cilmi baarayaal ah ayaa ku guuleystey inay ogaadaan u nuglaanshaha weyn ee ku jira algorithms-ka ugu badan ee loo adeegsado algorithms adduunka oo dhan.
Beddelka ugu fiican ee PowerPoint
Ma waxaad raadineysaa waxyaabo kale oo lagu beddelo PowerPoint? Kuwani waa xulashooyinka ugu fiican ee lagu soo bandhigi karo internetka ama bilaash kombuyuutarkaaga.
Waad ku mahadsan tahay aqoonsiga wajiga ee Hindiya waxay ku guuleysteen inay helaan ku dhowaad 3.000 carruur ah oo lumay afar maalmood gudahood
Hay'ad laga leeyahay dalka Hindiya ayaa ku guuleysatay inay soo saarto barnaamij aqoonsi wajiga ah oo awood u leh inay raadiso carruur la la'yahay. Intii lagu guda jiray tijaabooyinka tijaabada, ku dhowaad 3.000 oo carruur ah ayaa laga helay wax ka yar afar maalmood.
Chrome waa mid aad u gaabis ah, sida dib loogu bilaabo
Haddii biraawsarka Chrome ee Google uu bilaabay inuu muujiyo astaamaha daalka, waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii la nadiifin lahaa. Hoos waxaan kuugu soo bandhigeynaa cashar yar oo aan ku tusineyno waxa la sameeyo marka Chrome aad u gaabis yahay.
Firefox waxay bilaabi doontaa inay muujiso xayeysiiska nooca xiga markaan furno tab cusub
Hay'adda Mozilla Foundation ayaa hadda ku dhawaaqday in nooca soo socda ee biraawsarka Firefox uu bilaabi doono inuu muujiyo xayeysiis mar kasta oo aan tab cusub fureyno.
Ciladda amniga Twitter ayaa si adag noogula talinaysa in la beddelo lambarka sirta ah
Waxay u muuqataa in qofna uusan ka badbaadin dhibaatooyinka la xiriira amniga lambarka sirta ah iyo kiiskan ...
Opera Touch, oo ah biraawsar web wareega oo aad ku isticmaali karto hal gacan
Opera Touch waa shirkada cusub ee mobilada moobilka kaa siin doonta inaad wax walba ku maamusho hal gacan oo keliya. Waqtigan xaadirka ah waxaa kaliya loo heli karaa Android
Sida loo raadsado Dhammaan Furan 'Tabs Chrome'
Haddii aan dooneyno inaan ka dhex raadinno shuruudaha dhammaan tabyada ka furan bog furaha kumbuyuutarka ee Chrome, waa inaan isticmaalnaa kordhin loo yaqaan 'Search Plus'.
Thanks to NVIDIA mar dambe uma baahnid inaad noqotid khabiir PhotoShop ah si aad wax uga bedesho sawir sida pro
NVIDIA waxay na tusaysaa natiijooyinka ugu horeeya ee softiweerkeeda awood u leh inay wax ka bedesho sawirada gabi ahaanba si otomaatig ah, wax kaa dhigi doona inaadan u baahnayn inaad ogaato sida loo maareeyo PhotoShop sida xirfadle.
WhatsApp ayaa noo oggolaan doonta inaan soo dejino nuqul ka mid ah xogteenna
WhatsApp waxay kuxirantahay talaabooyinka cusub ee dhaqan gali doona 25ka Meey Yurub oo dhan. Taasna waxay u oggolaaneysaa isticmaalaha inuu soo dejiyo nuqul dhammaystiran oo dhammaan xogtooda
Nintendo Switch ayaa ugu dambeyntii la jabsaday oo cidina ma hagaajin karto
Laba kooxood oo u heellan horumarinta ka faa'iideysiga sida FailOverflow iyo ReSwitched ayaa ku guuleystey inay jabsadaan Nintendo Switch iyagoo ka faa'iideysanaya dhibaatada ku jirta soodhoweynta Nvidia Tegra X1, oo ah cillad aan dib loo hagaajin karin Nintendo lafteeda.
Wadahadal: Beddelka cusub ee Google ee WhatsApp
Wadahadal: Codsiga farriinta cusub ee Google. Ka ogow wax badan oo ku saabsan arjiga fariinta cusub ee ay shirkaddu ku bilaabayso suuqa goor dhow.
Microsoft waxay sii deyneysaa Windows Defender kordhinta Chrome
Ragga ka socda Redmond waxay bilaabeen kordhin dheeraad ah oo loogu talagalay biraawsarka Chrome kaas oo u oggolaanaya adeegsadayaasha biraawsarkan inay ku raaxaystaan ​​Windows Defender
Maareeyayaasha sirta ugu fiican
Ma waxaad dooneysaa maamulaha ereyga ugu fiican? Gali oo soo hel 5-ta ugu fiican ee aad sirtaada ku xafidan karto kuna xirnaato qalabka.
Google wuxuu tijaabinayaa toobiye kumbuyuutar ah si loo qoro Emojis
Google wuxuu u shaqeynayaa si aad ugu qori karto emojis ama emoticons Google Chrome qaab aad u fudud. Waxaad hadda ku tijaabin kartaa Google Chrome Canary
Beta beta-ka WhatsApp wuxuu kuu ogolaanayaa inaad daawato fiidiyowyada YouTube-ka adigoon ka bixin barnaamijka
Tani waa wax ay adeegsadayaasha barnaamijkan farriinta ah ay weydiinayeen muddo dheer, hadda ...
Xidhiidhkaagu waa 'qoraal' laakiin farriintaasi kama dambaynayso inay timaaddo. Maxaa run ahaantii dhaca?
Gelitaan meesha aan ku falanqeyn doonno waxa ku dhacaya tilmaamaha 'teeb garaynta' ee ka muuqda codsiyada farriimaha degdegga ah ee kala duwan marka xiriir lala soo diro farriin.
Instragram wuxuu mar kale tusi doonaa quudkeena sida ay u kala horeeyaan
Waqtiga ugu dambeeya, illaa iyo markii Facebook iibsaday Instagram, shabakadda bulshada ee sawirka ayaa beddeli doonta algorithm-ka quudinta mar kale, taas oo noo oggolaanaysa inaan soo bandhigno waxyaabaha ku jira taariikh ahaan.
Nooca xiga ee Windows 10 wuxuu kaliya ka furi doonaa xiriiriyeyaasha Mail iyada oo loo marayo Microsoft Edge
Mid ka mid ah howlaha cusub ee Microsoft ay tijaabineyso noocyada mustaqbalka ee Windows 10, waxaan ku aragnaa waajibaadka ah in la furo xiriirinta Boostada kaliya Microsoft Edge
Unsubscriber, habka ugu fudud ee looga takhaluso spam
Ma rabtaa inaad ka takhalusto kuwan diiwaangelinta dhibta leh ee ku jira emaylkaaga? Unsubscriber waa adeeg bilaash ah oo kaa caawin doona bilowga
Microsoft waxay mar kale u ogolaaneysaa Windows 10 bilaash
Haddii aad rabto inaad kiciso nuqul ka mid ah Windows 10 gabi ahaanba bilaash, maalmahaas waxaad fursad u leedahay inaad markale sameyso adigoon ku bixin hal euro.
Sameeyaha Heesta: Qalabka cusub ee Google ee lagu abuurayo muusikadaada
Sameeyaha Heesta: Qalabka cusub ee Google ee lagu abuurayo muusikadaada. Raadi wax badan oo ku saabsan qalabkan kuu oggolaanaya inaad abuurto muusig.
WhatsApp wuxuu kuu ogolaanayaa inaad tirtirto fariimaha la soo diray wax ka badan saacad ka hor
WhatsApp for Android waxay heli doontaa cusbooneysi cusub oo aan ku heli doonno horumar aad u muhiim ah marka la eego waqtiga si loo tirtiro farriinta.
Movavi: Tifatirayaasha ugu badan ee sawir iyo fiidiyoow ah ee Windows iyo Mac
Movavi: Tifatirayaasha ugu badan ee sawir iyo muuqaal ah ee Windows iyo Mac. Ogow wax intaa ka badan oo ku saabsan tifaftirayaashan oo ka dhigaya wax ka beddelka sawirrada ama fiidiyowyada mid fudud oo na siinaya fursado badan.
Kiiboodhka caanka ah ee loo yaqaan 'Swype keyboard' ee casriga ah mar dambe lama cusbooneysiin doono
Kiiboodhka caanka ah ee loo yaqaan 'Swype keyboard' ma sii heli doono wixii cusbooneysiin ah ee horumariyayaashuna waxay ka saareen kaydka codsiyada Apple iyo Google
Chuletator iyo waxyaabo kale oo lagu beddeli karo
Ninku kuma noolaado Chuletator kaligiis. Maqaalkan waxaan ku tusaynaa beddelka ugu wanaagsan ee aan ka heli karno internetka si loo sameeyo garoocooyin naga caawin doona inaan ka gudubno imtixaannada iyadoo aan la baran.
Nidaamyada sirdoonka macmalka ah ee Google ayaa durbaba awood u leh inay qoraan maqaalada Wikipedia si iskiis ah
Injineerada Google waxay ku guuleysteen inay qalabeeyaan nidaamyadooda sirdoonka macmalka ah oo leh awood ku filan sidaa darteed software-kan hadda awood u leh inuu qoro maqaallada Wikipedia gabi ahaanba si iskiis ah.
Microsoft waxay nadiifisaa dukaanka Microsoft, iyadoo tirtirta dhammaan barnaamijyada adeegsada magaca Windows-ka
Shirkadda Microsoft ayaa bilawday inay tirtirto dhamaan barnaamijyada kusoo bandhiga erayga Windows magacooda ama tilmaantooda, si looga hortago inay marin habaabiyaan.
Pixabay wuxuu bilaabayaa laba qalab oo loogu talagalay Photoshop iyo Microsoft Office
Pixabay wuxuu sii daayay laba qalab oo si toos ah ula midoobi doona Adobe Photoshop iyo Microsoft Office si ay u bixiyaan khibrad shaqo oo aad u fudud
Microsoft Photos Companion, habka ugu fudud ee sawirrada looga wareejiyo mobiilkaaga PC-gaaga
Microsoft ayaa soo bandhigtay codsi cusub oo loogu talagay Android iyo iOS si ay ugu wareejiso sawirada moobilka ama kaniiniga una wareejiso Windows 10 mid aad uga dhakhso badan uguna dhaqsi badan.
Sida loo soo ceshado badhanka «Arag sawirka» Google Chrome iyo Firefox
Waad ku mahadsantahay kordhinta Google Chrome, 24 saac ka dib markii aad ka saartay muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka raadinta sawirka, si fudud ayaan uga soo kaban karnaa.
Google wuxuu sharxayaa sida xayeysiiska cusub ee Chrome u shaqeeyo
Gelitaanka meesha aan ka hadli doonno sida, sida lagu sharraxay Google lafteeda, xayeysiiyaha xayeysiiska ah ee ay ku dhex biiriyeen biraawsarka Chrome wuxuu shaqeynayaa
Fedora waxay leedahay xalka lagu kordhinayo waxqabadka batteriga laptop-ka 30%
Koox ka mid ah horumariyeyaasha Fedora ayaa ku guuleystay inay hirgeliyaan dhowr horumar oo ay ku andacoodaan inaad ku kordhin karto nolosha waxtarka leh ee batteriga laptop-ka illaa 30%.
Laga bilaabo Julaay, biraawsarka Chrome ayaa na soo ogeysiin doona markaan booqanno degel aan ammaan ahayn
Laga bilaabo Juun, biraawsarka Google, Chrome, wuxuu bilaabi doonaa inuu ogeysiiyo isticmaaleyaasha markay booqdaan degel nabadgelyo darro ah, taas oo ah, HTTP, sidaa darteed ma qarin karto xogta markii loo diro internetka.
Sida loo ciyaaro faylasha mkv
Faylasha mkv waa ikhtiyaarka ugufiican ee la isugu geyn karo qaabab kaladuwan oo maqal ah, video iyo cinwaan hoosaadyo ah hal fayl, laakiin nasiib daro dhamaan nidaamyada hawlgalka ma bixiyaan taageero hooyo Qodobkaan waxaan kusoo bandhigeynaa sida loogu ciyaaro feylasha mkv iyo waxaad ubaahantahay si filim uusan kuu hor istaagi karin.
Opera 51, biraawsarka cusub ee Opera ayaa ka dhaqso badan Firefox Quantum
Opera waxay soo saartay nooc cusub oo ka mid ah biraawsarkeeda caanka ah: Opera 51. Noocani wuxuu ka kooban yahay horumarin badan iyo darajooyin sida web browserka ugu dhaqsaha badan maanta
Microsoft waxay dishaa Windows 10 S 8 bilood kadib markii la siidaayay
Shirkadda weyn ee 'Redmond' ayaa kal hore soo bandhigtay sharad soo jiitay dareen gaar ah oo ay ...
ChromeOS 64 waxay la timid horumarin muddo dheer la sugayay
Google waxay cusbooneysiineysaa cusbooneysiin cusub nidaamka hawlgalka desktop-ka. Waa ChromeOS 64, oo bixisa horumarin badan
Sida loo saxo khalad Windows 10 muhiim ah
Mid ka mid ah dhibaatooyinka isticmaaleyaal badani ay la kulmaan maalinba maalinta ka dambeysa waxay la xiriirtaa khaladaadka muhiimka ah ee Windows 10, khaladaadka muhiimka ah ee leh xal aad u fudud sida aan kugu tusno maqaalkan. Miyaad ku leedahay qalad muhiim ah liiska bilowga iyo cortana? Gali oo waxaan kuu sheegi doonaa sida loo xaliyo.
Sida loo hagaajiyo "com.google.process.gapps process has istaagay" qalad
Haddii fariinta "howsha com.google.process.gapps ay joogsatay" ay si isdaba joog ah uga muuqato qalabkaaga, waa kuwan talaabooyinka la raacayo si loo xaliyo.
Dhowr saacadood gudahood Xiaomi wuxuu xalliyaa dhibaatada cusbooneysiinta Mi A1
Runta ayaa ah in lagu qanacsan yahay in shirkadda Shiinaha ay bateriga ku xirtay arrintan iyo ...
Google wuxuu ku tijaabiyaa Fuchsia OS Pixelbooks
Google wuxuu sii wadaa inuu ka shaqeeyo nidaamkiisa soo socda ee loo yaqaan Fuchsia OS. Oo waxay sii deysay dukumiintiyada si ay ugu awoodaan inay ku rakibaan Pixelbooks
Opera 50 waxay la midoobi doontaa ilaalinta asalka ah macdanta 'cryptocurrency'
Si looga hortago asxaabta dadka kale inay ka faa'iideystaan ​​qaar ka mid ah isticmaaleyaasha, Opera waxay asal ahaan u soo bandhigi doontaa qufulka 'cryptocurrency' nuuciisa soo socda
Microsoft waxay ka saareysaa biraawsarka Chrome ee Google dukaanka Microsoft dukaanka maadaama aysan la kulmin tilmaamaha
Kumbuyuutarka loo yaqaan 'Chrome launcher' ee laga helo Microsoft Store ayaa laga mamnuucay Microsoft Store, isagoo jabinaya tilmaamaha dukaanka
Chrome 64 ayaa kuu oggolaan doona inaad aamusiso fiidiyowyada si toos ah u ciyaara
Nooca cusub ee Chrome 64 wuxuu yeelan doonaa ikhtiyaar ay si aad ah u dalbadaan dadka isticmaala: in la aamusiyo fiidiyowyada si otomaatig ah loogu ciyaaro
Khariidadaha Google ayaan kuu oggolaan doonin inaad ka boodo joogsigaaga gaadiidka dadweynaha ee soo socda
Khariidadaha Google ee loogu talagalay Android waxay ku dareysaa hawl cusub oo aad u xiiso badan kuwa isticmaala gaadiidka dadweynaha maalin kasta. Waqtigan xaadirka ah kaliya ee loogu talagalay Android
Chrome wuxuu noo ogolaanayaa inaan aamusiino si toos ah fiidiyaha
Cusboonaysiinta soo socota ee Chrome waxay noo oggolaan doontaa inaan ka fogaanno soo-saarka tooska ah ee fiidiyowga, bogagga shabakadaha aan dooneyno.
Xiaomi Mi A1 way yar yihiin laakiin waxay durba bilaabeen inay helaan Android 8.0 Oreo
Waxay u muuqataa xitaa wax la yaab leh in qalab ay adagtahay in la helo horeyba uu diyaariyay ama uu horeyba u helayo cusbooneysiinta ...
Apple ayaa ku dhawaaqi karta iibsashada Shazam maanta
Sida ay sheegayaan warar badan oo xan, iibsiga Apple ee adeegga aqoonsiga muusigga Shazam ayaa maanta lagu dhawaaqi karaa
Sirdoonka macmalka ah ayaa sidoo kale yimaada Photoshop si looga saaro asalka sawirada
Thanks to sirdoonka macmalka ah, nooca soo socda ee Photoshop wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku toogno asalka shayga ugu weyn qaab aad u fudud.
Pixelmator Pro, oo beddel u ah Photoshop ee loogu talagalay dadka isticmaala Mac, ayaa ku dhuftey suuqa
Nooca xirfadeed ee Pixelmator Pro wuxuu noqonayaa mid ka badan wax ku ool u ah dhammaan kuwa isticmaala Photoshop.
Android 8.1 Oreo horeyba waa rasmi, waxaan kuu soo bandhigeynaa dhammaan wararka
Waxaan horeyba uheynay cusbooneysiintii ugu horeysay ee nidaamka qalliinka Android 8 Oreo, kiiskan waa nooca ...
U nuglaanta macOS High Sierra waxay siineysaa maamule inuu helo Mac. Waxaan ku tuseynaa xal ku meel gaar ah
Nuglaanshaha ugu dambeysa ee ugu weyn ee saameeya nidaamka hawlgalka waxaa laga helay macOS High Sierra wuxuuna saameeyaa Apple Macs.
Android loogu talagalay PC
Soo ogow ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu rakibo Android kombiyuutarkaaga. Waxaan ku tusinaynaa kuwaas oo ah xulashooyinka ugu fiican iyo emulators inaad ku raaxaysato Android kombiyuutarkaaga
YouTube ayaa kuu oggolaanaya inaad iibsato tikidhada riwaayadaha
YouTube waxay la saxeexday wadashaqayn madal Ticketmaster ah. Hada laga bilaabo waxay suurtagal noqon doontaa in tikidhada riwaayadaha laga iibsado adeegga qulqulka
Firefox Quantum ayaa kuu imaaneysa inaad kaa tagto daalacayaashaada kale
Firefox Quantum waa nooca ugu awoodda badan biraawsarka Mozilla. Way ka dhakhso badan tahay, waxay isticmaashaa RAM ka yar kan Chrome, waxayna leedahay UI cusub
Tifatirayaasha sawirka tooska ah
Haddii aan dooneyno inaan tafatirno sawirradeena, waxaan ka heli karnaa adeegyo badan internetka. Waxaan ku tusineynaa kuwa ugu fiican tifaftireyaasha sawir-qaadashada khadka tooska ah.
Acumos, maxaa yeelay il furan oo sirdoon macmal ah ayaa suurtagal ah
Gelitaanka meesha aan ka hadli doonno Acumos, oo ah nidaam sirdoon farsamo furan oo cusub oo ay soo saartay Linux Foundation.
Qof shaqaale Microsoft ah ayaa ku rakibay Chrome dhexda bandhigga maxaa yeelay Edge wuu joojiyay shaqadii
Waxay umuuqataa inay Microsoft leedahay qorshe B ah marka Microsoft Edge joojiso ka shaqeynta soo bandhigida: rakib Google Chrome
Iska yaree fiidiyowyada internetka
Kahor intaadan wadaagin fiidiyowyada, waxaa laga yaabaa inaad jarto iyaga si aad uga yareyso. Waxaan ku tuseynaa adeegyada ugu fiican ee fiidiyowyada lagu jaro khadka tooska ah
Antivirus-ka ugu fiican ee bilaashka ah
Haddii aad raadineysid antivirus bilaash ah, qodobkaan waxaan ku tusi doonaa oo ah kuwa hadda ugu antivirus bilaash ah suuqa.
Kordhinta 1Password ee Microsoft Edge hadda waa la heli karaa
Hal sano kadib markii lagu dhawaaqay, kordhinta 1Password ee Microsoft Edge hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo.
Macdanta Cryptocurrency, soo hel sida lacag looga sameeyo macdanta daruuraha
Ma rabtaa inaad lacag ka sameysid macdanta Bitcoins? Hadda way fududahay mahadsanid macdanta cryptocurrency ee Cloud. Soo ogow sida macdanta loo qodo Bitcoin.
Xafiiska 2019 ayaa imanaya sanadka soo socda si loo beddelo Xafiiska 2016
Microsoft waxay ku dhawaaqday daahfurka Office 2019, nooca cusub ee xafiiska caadiga ah bartamaha sanadka soo socda
macOS High Sierra hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo
Nooca ugu dambeeyay ee macOS ayaa hadda loo heli karaa si bilaash ah oo loo soo dejiyo iyada oo loo marayo Mac App Store
Sida loo suurtogeliyo dejinta wadaagista ee Windows 10 oo qarsoodi ahaan qarsoodi ah
Maanta waxaan ku baraynaa sida loo kartiyeeyo goobaha wadaagga ee Windows 10, oo si qarsoodi ah u qarsoon oo aan sida ugu badan uga faa'iideysan doonno.
BlueBorne, waa u nuglaanshaha saameynaya in ka badan 5.000 milyan oo qalab adduunka oo dhan
Gelitaanka halkaas oo aan ka hadli doonno BlueBorne, waa u nuglaansho daran nidaam kasta oo Bluetooth ah oo saameeya in ka badan 5.000 bilyan oo qalab.
Google Chrome ayaa joojin doonta ku ciyaarida waxyaabaha si toos ah codka
Google Chrome wuxuu noo oggolaan doonaa si dhakhso leh in loo joojiyo soo-saaridda otomaatigga ah ee tooska ah oo leh dhawaaq ka careysiinaya dhammaanteen maanta.
Weerar lagu qaaday EQUIFAX wuxuu ku egyahay xatooyada macluumaadka mudnaanta leh ee 143 milyan oo isticmaale
Koox Hackers ah ayaa ku guuleystey inay ka xadaan wax aan ka yarayn 143 milyan xog shaqsiyadeed hay'ada amaahda ee EQUIFAX, oo ah shirkad hoosaad ASNEFF.
Dayactir sawirada burburay
Soo ogow 4 barnaamij oo aad ku dayactirto sawirrada burburay si aadan u luminin sawiradaas muhiimka ah ee xilliyada gaarka ah. Dib u soo kabashada sawirada burburay waa suurtagal.
Dukumiintiyadii ugu dambeeyay ee Windows 10
Soo ogow sida loo arko faylalka ugu dambeeyay ee Windows 10. Haddii aad lumisay raadinta dukumiintiyadaadii ugu dambeeyay ee Windows 10, akhri casharradan tallaabo-tallaabo ah.
Koronto-dhaliye wax sii
Waxaan ogaaneynaa matoorrada bixiya ee ugu fiican sidaa darteed waxaad ku sameyn kartaa lacag bixinta khadka tooska ah ee magacyada ama wax kasta oo aad u baahan tahay. Gali oo abaabul bakhtigaaga!
Guba ISO in DVD
5 codsi oo lagu gubayo ISO-ka DVD-ga ama warbaahinta kale sida CD-ROM ama Bluray. Haddii ay tahay inaad ku gubto sawir ISO ah DVD, waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo.
Warqad, oo ka socota Dropbox, waxay hagaajineysaa shaqada iskaashiga Sketch, fayl iyo waxyaabo kale oo badan
Dropbox Paper wuxuu wanaajiyaa jawigaaga shaqada wada shaqeynta iyadoo la soo bandhigayo astaamo cusub sida Folders, Archive, Sketch Integration, iyo inbadan.
Ma rabtaa inaad sameysid qoraallo qoraal ah? Kuwani waa barnaamijyada iyo websaydhyada ugu wanaagsan ee lagu sameeyo qoraal magac bilaash ah. Ma taqaanaa Abuuraha Graffiti? Soo ogow!
Google Chrome ayaa noo oggolaan doonta inaan ka saarno dhawaaqa bogagga weligood
Mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee noocyada soo socda ee Chrome ay heli doonaan waxaa laga helay ikhtiyaarka lagu baabi'inayo dhawaqa webka
Hadda waxaad ku isticmaali kartaa kumbuyuutar Samsung ah "dhammaan" taleefannada casriga ah ee Android
Samsung ayaa ku dhawaaqday in biraawsarkooda internetka Samsung Internet Browser hadda loo isticmaali karo taleefannada casriga ah ee Android
NASA waxay ku tiirsan tahay nidaamyada sirdoonka macmalka ah ee Intel si ay u sahamiyaan booska
NASA ayaa hada ku dhawaaqday heshiis wada shaqeyn ah oo ay la gashay Intel si ay ugu adeegsato nidaamkeeda sirdoonka macmalka ah falanqaynta xogta wakaalada.
Hadda waxaad qaadan kartaa sawirro dusha sare ah iyo 360º adigoon ka bixin Facebook
Cusbooneysiin cusub oo lagu soo rogay Facebook ayaa u oggolaaneysa dadka isticmaala inay qaataan oo wadaagaan sawirro indha indheyn ah iyo 360º ah iyagoon ka tagin dalabka moobiilka
Android Oreo: magaceeda waa la xaqiijiyay waana kuwan wararka ugu waaweyn
Shirkadda Google ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay nuucyadeeda cusub ee ay ku shaqeyneyso telefoonnada gacanta iyo kaniiniyada: Android Oreo ama Android 8.0
Android O waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa Ogosto 21
Android O waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa Ogosto 21. Taasi waa, waxay la wadaagi doontaa iftiinka qorrax madoobaadka soo socda
Tayadoodii Windows 10
Khiyaamadaani waxay naga caawin doonaan inaan hagaajino Windows 10 oo ka dhigno kombiyuutarkeena inuu si fiican u shaqeeyo, dhaqso badan oo aan na siinin dhibaatooyin badan.
Ilaa 4.000 barnaamijyadooda Android ah ayaa ku basaasi kara adiga
Qaar ka mid ah khubarada amniga ayaa ogaaday in ay jiraan in ka badan 4.000 oo codsiyo Android ah oo basaasi kara waxa aad ku sameyso mobilkaaga
Sida loo rakibo xirmo luqadeed Windows-ka
Halkee lagala soo bixi karaa luqadda Isbaanishka ee Windows 7 ama Windows 10? Soo ogow xeelad aad ku rakibo ama aad ku tirtirto xirmo luqadeed Windows-ka
Windows 10 sawir qaade
Daawade sawir oo Windows 10 ah ayaa badanaa daallan oo gaabis ah. Taasi waa sababta aan kuu barayno sida loogu laabto Muuqaalka Muuqaalka Windows ee Windows 10.
Sida Loogu Soo Degsado Muusikada YouTube-ka VidToMp3
Waxaan ku tusineynaa sida loo isticmaalo VidtoMP3 iyo xulashooyinka kale si aad ugala soo baxdo muusig bilaash ah, fiidiyowyo iyo heeso YouTube qaab MP3 ah.
Ku nadiifi kombuyutarkaaga Nero TuneItUp
Thanks to software-ka Nero TuneItPro, waxaan si aad ah ugu horumarin karnaa waxqabadka kombuyutarkayga dhowr ilbiriqsi.
WhatsApp waxay hagaajin doontaa qoraalada codka waxaadna heli doontaa waqti badan oo wax lagu qoro
Cusbooneysiinta WhatsApp waa wax caadi ah. Midka ugu dambeeyaana waa inuu ku xirnaadaa mid ka mid ah shaqooyinka ugu caansan ee adeegga: fariimaha maqalka
Waa maxay macnaha guud? Haddii aad taqaanid sida loo maareeyo menu-ka macnaha guud ee ku jira Windows, waxaad badbaadin doontaa waqti badan oo aad kula shaqeyso kombuyuutarkaaga. Waxaan ku tusaynaa sida loo isticmaalo.
Waad ku mahadsan tahay adeegga cusub ee Mozilla, waxaan u diri karnaa feylasha illaa 1 GB si ammaan ah
Thanks to Send, waxaan u diri karnaa feylasha ilaa 1 GB oo cabirkoodu gabi ahaanba sugan yahay oo dhacayo
OffLiberty, ka soo dejiso fiidiyowyo dhaadheer youtube
OffLiberty waa barnaamij internet oo bilaash ah oo noo ogolaanaya inaan ka soo dejino fiidiyowyada iyo muusikada YouTube-ka PC-ga, moobaylka ama kaniiniga qaab MP4 iyo MP3 ah
Sideen ku ogaan karaa waxa adag ee aan haysto?
Soo ogow sida loo ogaado darawalnimada adag ee aan ku haysto kumbuyuutarkayga iyadoo la adeegsanayo xeelad fudud ama dhowr qalab oo bilaash ah. Waa maxay nooca HDD ama SSD ee aad haysato? Soo ogow!
Xannibi Kanaallada YouTube
Haddii aad rabto inaad xannibto kanaallada YouTube, iyadoo xeelad yar laynagu heli doonno suurtagalnimada inaan ku xakameyno fiidiyowyada kanaalka YouTube ee aadan jeclayn.
Ukunta xaraashka ah ee lagu qariyo beta afar ka mid ah Android 8.0 ayaa kicisay alaarmiga: Octopus ma noqon doonaa magaca loo bixiyay noocaan cusub?
WhatsApp waxay leedahay rikoor cusub: 1.000 bilyan oo isticmaale maalin kasta
WhatsApp waa barnaamijka ugu caansan ee fariimaha deg dega ah ee adduunka. Iyo tirooyinka ay ka bixiyeen boggooda rasmiga ah ayaa tan xaqiijinaya.
Sida loo isticmaalo digniinta iyo soo-kicinta ee Windows 10
Windows 10 wuxuu leeyahay alaarmiga, saacadda alaarmiga iyo saacad leh naqshad loogu talagalay in lagu beddelo ta qalabka mobilada. Waxaan ku tuseynaa sida loo isticmaalo
Google wuxuu doonayaa inuu xalliyo dhammaan dhibaatooyinka isku dhafka nukliyeerka
Google ayaa hadda ku dhawaaqday isbahaysiga ay la leedahay shirkadda Tri Alpha Energy si ay u horumariso nidaam awood u leh in lagu xalliyo dhibaatooyinka isku dhafka nukliyeerka
Kaspersky wuxuu bilaabayaa antivirus bilaash ah Windows
Kaspersky Shaybaarka wuxuu bilaabayaa antivirus bilaash ah Windows-ka oo loo yaqaan 'Kaspersky Lab', muxuu dhab ahaan ka kooban yahay maxaase hada u bilaabaya?
Jawaabaha Gmail Smart hadda waxaa lagu heli karaa Isbaanish
Gmail Smart Answers hadda laguma heli karo oo keliya Ingiriisiga, laakiin kooxda horumarinta waxay ku dareen luqad cusub: Isbaanish.
Tani waa habka ugu jaban ee lagula socdo gurigaaga casrigaaga casriga ah
Gelitaanka halkaas oo aan ka hadli doonno nidaam aad u fudud in la hirgeliyo si loola socdo gurigaaga inta lagu jiro fasaxyada xagaaga.
Kuwani waa shaqooyinka iyo barnaamijyada ku baaba'aya cusbooneysiinta soo socota ee Windows 10
Microsoft ayaa hadda ku dhawaaqday iyada oo loo marayo barteeda taas oo noqon doonta shaqooyinka iyo codsiyada aan ka sii jiri doonin nooca xiga ee Windows
Deseat.me, ka nadiifi iimaylkaaga kuwan rukunka ku faraxsan
Ma ka mid tahay kuwa iska diiwaangeliya adeegyo fara badan ka dibna ka hela sanduuqaaga boosta oo ay ka buuxaan Spam? In Deseat.me waxaad ku leedahay xalka
Atomian, taasi waa magaca Walaalkii Weynaa ee ay isticmaali jirtay FC Barcelona
FC Barcelona waxay ubaahantahay maamule weyn dhamaan xogta ay soo saarto. Atomian ayaa mas'uul ka ah inuu noqdo walaalkiisa weyn ee weyn
CCleaner wuxuu beddelaa lahaanshaha oo wuxuu ka mid noqday Avast
Sanadihii la soo dhaafay waxaan aragnay sida shirkadaha softiweer ee cusub ay u heleen nook muhiim u ah ...
Sida loo arko furaha sirta ah ee ku qarsoon astaanta xiddigta
Khiyaanooyin yar ayaynu ku lahaan doonnaa suurtogalnimada inaan ku aragno erey sir ah oo ku qarsoon xiddigta gadaasheeda. Haddii aadan xusuusan baas, waa sidaad u arki karto.
Amazon waxay ku shaqeysaa barnaamijkeeda fariimaha
Amazon waxay ku shaqeyn laheyd barnaamijkeeda fariimaha ee loo yaqaan 'Waqti kasta' oo keenaya shaqooyin cusub iyo isdhexgal alaabooyinkeeda kale
Qalabka ereyada internetka
Ma rabtaa inaad ku isticmaasho ereyga khadka tooska ah iyo bilaash? Ha seegin xulashada kuwa ugu fiican ee ka shaqeeya ereyada khadka tooska ah ee internetka si aad u saxdo dukumiintiyada.
Google wuxuu bilaabayaa codsi lagu sameeyo nuqulo ku saabsan darawalkeena adag ee Drive-ka ah
Shirkadda Google ayaa hadda bilowday codsi cusub oo ay ku kaydinayso nooc kasta oo faylal ah oo ku jira kombuyuutarkeena ku yaal Google Drive.
Google wuxuu na tusayaa tayada ay muujisay sirdoonkeeda macmalka ah ee sawir celinta
Gelitaanka meesha aan ka hadli doonno shaqadii ugu dambeysay ee weyn ee ay qabatay Google, caqli macmal ah oo karti u leh tafatirka sawirrada oo leh tayo xirfad leh
Tifatiraha fiidiyowga ee bilaashka ah
Ha moogaanin tafatirayaasha fiidiyaha ah ee bilaashka ah ee aad kala soo bixi karto Windows, Mac ama Linux. Haddii aad u baahan tahay tifaftire fiidiyow ah, waxaad ka heli doontaa halkan.
Nabadgelyo Windows Phone 8.1
Microsoft waxay joojineysaa inay bixiso taageerada Windows Phone 8.1, sidaa darteed dadka isticmaala ma heli doonaan cusbooneysiin nooc kasta ah
Ubuntu hadda waa loo heli karaa si loogu soo dejiyo Windows Store
Ubuntu hadda waxaa loo heli karaa si bilaash ah oo laga soo dejiyo Windows Store maqaalkan waxaan kuu sheegi doonaa sida loo rakibo.
Snapchat wuxuu sii wadaa inuu sameeyo isbedel
Snapchat wuxuu bilaabayaa cusbooneysi cusub oo buuxa oo warar ah: wadaag boggaga dibedda ah, codkaaga beddel oo beddel asalka
Instagram hadda waxay u oggolaaneysaa xannibaadda faallooyinka iyo spam
Instagram ayaa hada soo saartay cusbooneysiin cusub halkaas oo dadka isticmaala ay awoodi doonaan inay xannibaan fariimaha iyo xitaa spam.
Sida loo demiyo cusbooneysiinta otomaatiga ee daaqadaha 10
Waa tan sida loo demiyo cusbooneysiinta otomaatiga ah ee Windows 10. Ka jooji kombuyuutarkaaga inuu si otomaatig ah u cusbooneysiiyo hab aan waqtigiisa ku habboonayn ee tallaabooyinkan
Sida loo soo cesho dhamaan xogtaada lumay iPhone iyo iPad
MobiSaver waa barnaamij xirfadle ah oo kuu oggolaanaya inaad ka soo kabato xogta lumay ama la tirtiray iyo feylashaada iPhone ama iPad, ama kaydintaada iCloud ama iTunes
DMZ, dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aad u abuurto aagagaga militariga ka caaggan
Soo ogow waxa martida loo yahay DMZ, sida loo qaabeeyey iyo waxa ikhtiyaarka DMZ ee ku jira dhammaan router-ada suuqa loogu talagalay. Miyey hagaajineysaa isku xirnaanta ciyaaraha fiidiyowga?
Facebook ayaa bilaabi doonta barnaamij cusub oo lagu abuurayo waxyaabaha ku jira fiidiyaha
Ragga ku jira Mark Zuckerberg ayaa ku dhawaaqay daahfurka tifaftire fiidiyow ah oo loogu talagalay abuurayaasha content dhammaadka sanadka.
Koodhkii sirta ee Windows 10 ee la helay waa sax sida ay xaqiijisay shirkadda Microsoft
Microsoft waxaa loo daayay wax kale oo aan ahayn si loo xaqiijiyo waxa qarsoonaa ee qarsoonaa, furaha ilaha sirta ee Windows 10 waa sax.
Bootooyinka ugu fiican Telegram
Soo hel botyada ugu fiican Telegram. Waxaan sharxeynaa waxa bot uu yahay, waxa loogu talagalay iyo sida loo qaabeeyey si looga faa'iideysto Telegram.
Spotify waxay soo saartay liisaska kooxeed ee fidinta Messenger
Shaqada cusub ee 'Spotify', waxaad ku abuuri kartaa koox ama liisaska wadajirka ah ee ay saaxiibbadaada Facebook sidoo kale uga qayb geli karaan.
Sida loo suurtogeliyo muuqaalka iskudhafka badan ee Firefox 54
Hawsha isku dhafan ee kumbuyuutareedka laguma dhaqmo wadan ahaan markii aan cusbooneysiino Firefox 54. Waxaan ku tusineynaa sida loo sameeyo.
Dhibaatooyin marka aad ku ciyaareyso khadka tooska ah? Waxaa laga yaabaa in hubinta PING ee isku xirnaantaada ay ku caawin doonto
Gelitaanka halkaas oo aan ka hadli doonno siyaabaha kala duwan ee loo hagaajiyo ping-ka kumbuyuutarkeena si loo joojiyo dhibaatada ka imaaneysa gaabis marka la ciyaarayo khadka tooska ah.
Facebook-ga ayaa la yaabay natiijooyinka lama filaanka ah ee ay soo bandhigtay nidaamkeeda sirdoonka macmalka ah
Waxaa jira ilo badan ama waqti, oo leh waxaas oo dhan, gaar ahaan xagga kharashyada, ...
Kordhinta ugu fiican iyo ku darida Firefox
Soo ogow fidinta iyo ku darida ugu fiican Firefox, oo ah mid ka mid ah daalacashada ugu fiican suuqa ee aad ku horumarin karto addons badan.
Kordhinta ugufiican ee Chrome
Dukaanka Chrome waxaan ka heli karnaa tiro balaaran oo loo kordhiyo si loo habeeyo isticmaalka Chrome. Waxaan ku tusaynaa waxa ugu fiican ee la heli karo.
Sida loo yareeyo buuqa loona hagaajiyo xallinta sawirrada aaladda internetka
Soo ogow hab fudud oo lagu hagaajin karo xallinta sawirrada isla markaana loo yareeyo buuqa khadka tooska ah iyadoo aan loo baahnayn barnaamijyo adag sida Photoshop.
Moodnotes, barnaamijka caafimaadka maskaxda ee abuureyaasha 'Monument Valley'
Moodnotes waa barnaamij ay soo saareen madaxa Monument Valley iyo laba dhakhtar cilminafsiyeed oo naga caawiya inaan kor u qaadno caafimaadka maskaxda.
Dhamaan wararka ku jira iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 iyo macOS High Sierra
Waxaan ku tuseynaa dhammaan wararka ku saabsan in nidaamyada hawlgalka Apple ee ku imaan doona qaabkoodii ugu dambeeyay laga bilaabo Sebtember
Iyada oo la adeegsanayo iOS 11, iPad-ka wuxuu u qaadanayaa boodbood ballaaran dhanka wax soo saarka
IPad-ka ayaa hadda uun la soo booday horumarkiisa weyn ee xagga wax-soo-saarka iyada oo ay ugu wacan tahay macruufka 11 iyo warkiisa weyn: Faylasha, Beddelaha App, Jiid iyo Drop iyo inbadan
Microsoft ayaa ku dhawaaqday iTunes inay imaaneyso Windows Store Dhawaan
Microsoft ayaa ku dhawaaqday Dhismaha 2017 in iTunes si dhakhso leh loo heli doono si looga soo dejiyo Windows 10 Windows Store.
Satya Nadella wuxuu xaqiijinayaa in Windows 10 lagu rakibay 500 milyan oo qalab
Windows 10 wuxuu horeyba ugujiraa 500 milyan oo qalab ama waxa lamid ah Microsoft ayaa aad uga fog inay gaarto hadafkeeda koowaad.
7 codsi oo aad had iyo jeer ku ogtahay halka aad dhigatay
Haddii aad ka mid tahay kuwa had iyo jeer ilooba inay ogaadaan meesha aad dhigatay, waxaan ku tusaynaa 7 codsi oo lagu xallinayo dhibaatadan
Youtube durba waxay leedahay qaab mugdi ah iyo ikhtiyaarro habeyn badan oo la heli karo
Naqshadeynta cusub ee YouTube ayaa horeyba loo isticmaali karaa dhowr toddobaad waxaadna si toos ah uga sameyn kartaa shabakadda ...
Sida loo furo faylka PDF
Furitaanka feylka qaab PDF ah waa hawl aad u fudud oo waxay qaadan doontaa oo kaliya dhowr daqiiqo in la raaco mid ka mid ah tallaabooyinka aan soo jeedineyno.
Sida loogu joojiyo Cortana 3 talaabo
Ka daa Cortana, kaaliyaha macmalka ah ee Microsoft, seddex talaabo oo fudud hada iyo qaab aad u fudud.
Bog furayaasha ugufiican Windows
Waxaan ku tusineynaa liiska daalacayaasha ugu wanaagsan Windows, oo aan si deg deg ah ugu soo dejisan karno, u rakibi karno uguna raaxeysan karno Windows PC-gaaga
WhatsApp ayaa lagu cusbooneysiiyay macruufka u oggolaanaya Siri inuu akhriyo farriimaha
Isticmaalayaasha IOS nasiib ayey ku leeyihiin haddii ay adeegsadaan Siri iyo barnaamijka farriimaha aan caadiga ahayn, WhatsApp. Markan ...
7 khiyaanooyin si looga faa'iideysto furayaasha qarsoon ee Netflix iyo menus
Gelitaanka meesha aan ka hadli doonno dhowr ka mid ah 'khiyaanooyinka' ugu xiisaha badan ee aad ku yeelan karto isticmaale diiwaangashan oo ka tirsan barnaamijka 'Netflix platform'.
The daalacashada ugu fiican ee Mac
Kuwani waa daalacashada ugu fiican ee Mac ee aad kala soo bixi karto, rakibi karto oo aad hadda ku raaxeysan karto kombuyuutarkaaga Apple.
Chrome wuxuu dhexgeli karaa xayaysiis xayeysiis dhammaan noocyadiisa
Sida laga soo xigtay ilo laxiriira Chrome, Google wuxuu dhexgalin karaa xayaysiis xayeysiis noocyada soosocda ee Chrome
Snapchat wuxuu ku dhiiradaa shaandhooyin dhab ah oo la kordhiyay
Snapchat wuxuu ku dhawaaqayaa warka barnaamijkiisa, oo ay ku jiraan imaatinka miirayaasha cusub ee horumarsan ee ku saleysan xaqiiqda la kordhiyay.
Sugitaanku wuu dhammaanayaa, Amazon Pay ayaa ugu dambeyntii timid Spain
Sugitaan dheer kadib waxaan ugu dambeyn ku dhawaaqi karnaa in Amazon Pay ugu dambeyn laga heli karo Spain.
Nooca cusub ee Google Earth hadda waa la heli karaa
Xaqiiqdii in ka badan mid ka mid ah kuwa halkan jooga ayaa adeegsada ama waligood adeegsada Google Earth, maxaa yeelay qalabkan weyn ...
Sida loo kiciyo Windows 10
Waxaan ku tusineynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad si sax ah ugu hawlgasho Windows 10
Sida loo kabo darawal adag si fudud oo dhaqso ah
Waxaad ubaahantahay inaad iskuxidhid kombuyutarkaaga adag, haka walwalin maanta waxaan kuu sharaxeynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ee fudud.
Kalandarka Google iyo Nidaamka Xiriirka Muuqaalka ayaa sii wadaya in lagu tijaabiyo macOS
Kalandarka Google iyo Xiriirinta Muuqaalka Muuqaalka waxay ka helayaan taxanayaal horumarineed Microsoft oo loogu talagalay dadka isticmaala ...
Microsoft hadda wixii ka dambeeya ma siiso taageero rasmi ah Windows Vista
Hagaag, inkasta oo warka uu muddo dheer ku dhawaaqayay in Microsoft ay joojinayso taageerida nidaamka qalliinka ...
Sida sawir loogu rogo sawir
Ku beddelashada sawirradeena sawirradu waa geedi socod aad u fudud oo ay ugu mahadcelinayaan tirada badan ee codsiyada loo heli karo nidaam kasta oo hawlgal.
Sida loo soo dejisto Windows 10, 8.1 iyo 7 bilaash qaab ISO ah
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo soo dejisto Windows 10, 8.1 iyo 7 oo bilaash ah qaabka ISO, si looga saaro dhibaatada badan isla markaana lagu badbaadiyo lacag fiican.
Sida loo keydiyo goobta aad dhigato ee Khariidadaha Google
Gelitaanka meesha aan ku soo bandhigi doono xalka ugu fudud ee suurtogalka ah si aan u badbaadin karno meesha gawaarideena ay ku leedahay Khariidadaha Google.
Nooca cusub ee Twitter-ka ayaa yimid, Twitter Lite oo noo ogolaanaya inaan keydinno xogta
Haddii uu jiro shabakad bulsheed oo aan shakhsi ahaan jeclahay, waa Twitter. Waa run inay leedahay faahfaahin qaar oo ...
Sida looga saaro xayeysiiska Windows 10
Waad ku mahadsan tahay feylkan yar ee wax ka beddelaya diiwaangelinta, waxaan joojin karnaa dhammaan xayeysiisyada ay Windows 10 na tusayso
Apple Music for Android waxaa lagu cusbooneysiiyay isdhexgal la mid ah kan iOS
Markii isticmaale-macruufka 10 lagu qasbay inuu isticmaalo terminaalka Android, oo uu doonayo ...
Google wuxuu u furayaa Android 7.1.2 Nexus iyo Google Pixel
Nooca cusub ee Android 7.1.2 wuxuu durbaba bilaabay inuu gaaro qalabka Google Nexus iyo Google Pixel. Tani…
Suurtagal ma tahay in dhadhanka loo diro khadka tooska ah? Baarayaasha ayaa durbaba ka shaqeynaya
Koox cilmi baarayaal ah oo ka socda Jaamacadda Singapore ayaa ku guuleystey inay dejiyaan hab ay ugu diraan dhadhanka internetka.
Telegram waa la cusbooneysiiyay si loogu daro wicitaanada
Telegram waa shaki la'aan arjiga fariinta ee si uun u wajahaya WhatsApp-ka caanka ah. Tani…
NASA waxay nagu la yaabtay maktabad ay ka buuxaan dhawaqyo, sawirro iyo fiidiyowyo meel bannaan ah
NASA ayaa naga yaabisay sii deynta mashiinka raadinta cusub ee loogu talagalay bixinta sawirada, fiidiyowyada iyo codka maqalka.
WhatsApp wuxuu yareeyaa waqtiga tirtirka fariimaha ilaa labo daqiiqo
Inaad awood u leedahay inaad tirtirto farriimaha WhatsApp shaki la’aan waa mid ka mid ah wararka aadka loo filayo ee adeegsadayaasha qaar ...
Microsoft ayaa wajahaysa dacwad cusub oo ku saabsan cusbooneysiinta kumbuyuutarrada iyadoon fasax laga haysan
Ragga ka socda Redmond waxay la kulmaan dalab cusub oo ka imanaya dadka isticmaala si otomaatig ah kor loogu qaado Windows 10
Microsoft waxay ka saareysaa Docs.com qalad aad u daran kadib
Toddobaadkan dhammaadkiisa Microsoft waxay go'aansatay inay ka saarto Docs.com ka dib markii ay caddeysay in mashiinka raadinta uu daadiyey malaayiin xog gaar ah.
Spotify waxay ku dhawaaqeysaa iibsiga MightyTV
Spotify ayaa hada sameysay cinwaano kadib marki ay shaacisay iibsashada MightyTV, oo ah madal talo soo jeedin ah oo maqal ah.
10 talooyin lagama maarmaan ah si loo abuuro degel leh WordPress
10ka talooyin ee aasaasiga ah marka la samaynayo degel leh Wordpress. Haddii aad isticmaaleyso Wordpress, waa inaadan ilaawin inaad raacdo tilmaamahan mid mid.
WhatsApp waxay kula socodsiin doontaa dadka aad la xiriirto si toos ah inaad bedeshay lambarka taleefankaaga
WhatsApp waxay soo saartay shaqeeyn taas oo xiriirkayaga loogu ogeysiiyo isbedelka lambarka taleefanka.
Cusboonaysiinta 'Instagram' ee amniga
Instagram waxaa lagu cusbooneysiin doonaa laba talaabo oo amni oo cusub, mid ka mid ah shahaadada koontada iyo mid kale oo xasaasi u ah waxyaabaha
Emojisyada cusub waxaa lagu arki karaa websaydhka Emojipedia
Waana in emoji ay qayb ka yihiin wadahadalladeena iyadoo loo marayo codsiyada farriimaha waxayna kuwani ku darayaan waxna ka beddelayaan kuwan ...
Apple waxay ku dhawaaqday iibsashada Workflow
Labadaba kuwa mas'uulka ka ah horumarinta dalabka shaqo iyo Apple lafteeduba waxay xaqiijiyeen la wareegitaankiisa Apple.
Clips, Apple ayaa ku tartamaya barnaamijyada sida Instagram iyo Snapchat
Apple waxay soo bandhigeysaa Clips, oo ah shabakad bulsheed cusub oo la tartami doonta, laga bilaabo bisha soo socota, iyadoo lala wadaagi doono kuwa kale sida Instagram ama Snapchat.
WhatsApp iyo heerarkiisa qoraalka ayaa hadda laga heli karaa Android markale
Toddobaadkii la soo dhaafay bilowga xaaladda WhatsApp ee qaab qoraal ayaa lagu dhawaaqay, iyo ...
Chrome wuxuu si weyn u hagaajiyaa farsamaynta 3D sawir
Cusboonaysiinta ugu dambaysa ee Google Chrome, taageerada heerka WebGL 2.0 ayaa lagu daray si loo hagaajiyo daaweynta sawirrada 3D.
Faylasha JPEG hadda waxay noqon doonaan 35% khafiif mahad software-ka Google
Koox cilmi baareyaal ah oo ka tirsan Google ayaa soo saaray algorithm cusub oo awood u leh yareynta cabbirka sawirrada JPEG iyadoo la kordhinayo tayadooda.
Gmail hada waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku ciyaarto fiidiyowyo adigoon soo dejisan
Google ayaa hada ku dhawaaqday cusbooneysiin cusub oo loogu talagalay Gmail taas oo hada aad ku daawan karto fiidiyowyada adigoon soo dejisan.
Hadda waxaad u isticmaali kartaa Alexa kaaliye caawiye ah iPhone-kaaga
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyey dalabka Amazon ee aaladaha iOS, suurtagalnimada isticmaalka Alexa oo ah kaaliyaha dalwaddii ayaa lagu soo daray.
WhatsApp gadaal ayey u socotaa waxayna u oggolaan doontaa dadka isticmaala inay dhigaan qoraallo qoraal ah
WhatsApp gadaal ayey ka noqotaa oo waxay go'aansataa inay u oggolaato dhammaan adeegsadayaasha farriinta deg-degga ah inay awoodaan inay qoraan qoraallada gobollada.
Gmail horeyba waxay kuu ogolaaneysaa inaad lacag ku dirto barnaamijkeeda
Ugu dambeyntiina, Google ayaa hadda si rasmi ah u shaacisay in Wallet uu si rasmi ah ugu yimaaddo Android asal ahaan, taas oo si weyn u fududeyn doonta adeegsiga
Skype loogu talagalay macOS waxay hadda la jaanqaadaysaa Taabashada Bar ee MacBook Pro cusub
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee barnaamijka Microsoft Skype, si loogu sameeyo wicitaano iyo wicitaanno fiidiyoow ah, waxay ka dhigeysaa mid la jaan qaada Touch Bar
Kuwani waa wararka ku jira naqshadeynta Google Hangouts
Google wali garan maayo hubaal waxa lagu sameeyo Google Hangouts, isbeddelkan waxay umuuqataa inay doonayaan inay diirada saaraan adeegsiga heerka ganacsiga.
DeepCoder hadda waxay awood u leedahay inay abuurto barnaamijyo iyo barnaamijyo u gaar ah
Maalin kasta xalal cusub oo cajaa'ib leh ayaa la soo bandhigaa kuwaas oo abuurayaashoodu rabaan inay nolosheena wax yar ka dhigaan ...
Nooca Chrome 57 ayaa hadda la heli karaa si loo soo dejiyo
Google ayaa hadda soo saartay cusbooneysiin cusub oo loo yaqaan 'Chrome', lambarka 57, oo ah nooca curyaamiya helitaanka fiilooyinka.
Google waxay maamushaa inay horumariso turjubaanka iyadoo adeegsaneysa caqliga macmalka ah
Google waxay ku dhawaaqeysaa in injineeradeeda ay ku darsadeen seddex luuqadood oo cusub barnaamijkeeda tarjumaada luqada AI.
Sida loogu daro ciyaaro kuu gaar ah NES Classic Mini
Hadda waan isku daynay runtiina waxaan u aragnay inay fududahay oo lagu taliyay in la siiyo qunsuliyaddan nolol labaad.
Kuwani waa wararka ay WhatsApp ku sii deyn doonto cusboonaysiinta soo socota
WhatsApp horeyba waxay u leedahay cusbooneysi cusub oo diyaar u ah barnaamijka caanka ah ee leh dhowr shaqooyin cusub oo midkoodna, ugu yaraan mid ka mid ah, aadan jeclaan doonin.
Amazon waxay sii deyn doontaa macluumaad kasta oo ay hayso haddii ay gacan ka geysan karto xallinta fal dambiyeed
Codsiga isticmaalaha leh Amazon Echo kadib, shirkaddu waa inay ka tanaasushaa dhammaan xogta uu duubay kaaliyaha dalwaddu.
Si dhakhso leh ayaan u awoodi doonnaa inaan tirtirno farriimaha lagu soo diray WhatsApp
Ka dib markii aan helnay wararka ku saabsan xaaladda WhatsApp dhowr toddobaad ka hor, hadda waxaan ka dhownahay ...
Waad ku mahadsantahay Sawirada Google hadda way fududahay in la saxo midabka sawiradaada
Sawirrada Google ayaa hadda wax laga beddelay si loogu daro hawl dheeri ah oo awood u leh inay sawirradaadu ka muuqdaan iftiinka iyo muuqaalka saxda ah.
Kaaliyaha Google ayaa lagu dhawaaqay dhammaan qalabka Android
Kani waa fiidiyowga ay shirkaddu hadda ku soo bandhigtay kaaliyeheeda gaarka ah dhammaan aaladaha ...
Cillad weyn oo xagga amniga ah ayaa laga helay Slack
Khabiir dhanka amniga ah ayaa la siiyay $ 3.000 si uu u ogaado cillad weyn oo dhanka amniga ah oo ka jirta barxadda caanka ah ee loo yaqaan 'Slack platform'.
CloudFlare waxay xog gaar ah ka sifeysay 1Password, Fitbit iyo Uber muddo bilo ah
CloudFlare waxay qireysaa in dhowr bilood ay laheyd ganacsi xasaasi ah iyo xogta isticmaaleha oo laga muujiyay internetka oo dhan.
Xayeysiiska ayaa ugu dambeyntii ka dhigaya fiidiyowyada Facebook
Facebook ayaa ugu dambeyntii u gudbin doonta 55% lacagta lagu helo adoo ku dhejinaya xayeysiinta fiidiyowyada qorayaasha isku mid ah.
Remix Singularity ayaa kuu oggolaan doonta inaad moobiilkaaga Android u rogto PC dhammaystiran
Jide Technology waxay si rasmi ah u soo bandhigeysaa Remix Singularity, oo ah hab fudud oo qalabkaaga moobiilka loogu beddelo kombiyuutar dhameystiran oo shaqeynaya.
Google waxay u oggolaan doontaa nidaamyadeeda sirdoonka macmalka ah inay dhexdhexaad ka dhigaan dhammaan noocyada shabakadaha
Google waxay ku dhawaaqeysaa in qeyb ka mid ah injineeradeeda ay ka shaqeynayaan nidaam cusub oo sirdoon farsameysan oo lagu ogaan karo faallooyinka dhaawaca leh.
Microsoft waxay ku dhawaaqeysaa inay timid cusboonaysiin weyn oo loogu talagalay Windows 10 dhammaadka 2017
Intii lagu guda jiray shirkii ugu dambeeyay ee ay qabatay Microsoft waxaan ogaanay in shirkadu qorsheyneyso inay soo saarto casriyeyn cusub oo loogu talagalay Windows 10 sanadkan 2017.
Heerarka WhatsApp ee horeyba looga heli jiray Spain
Subaxaan waxaan kahadalnay shaqada cusub ee barnaamijka fariinta ee WhatsApp loogu talagalay in lagubixiyo waxyaabaha soo socda ...